Madaxweyne Mustafe Oo Ku Dhow In Xilka Laga Qaado - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Oo Ku Dhow In Xilka Laga Qaado
Madaxweyne Mustafe Oo Ku Dhow In Xilka Laga Qaado
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa qarka u saaran in xilka laga qaado kaddib markii uu xilli dambe ka hor yimid qorshaha Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed uu xisbiga qaran ee PP ugu rogay EPRDF.
Sida uu qoray aqoonyahan Faysal Cabdi Rooble, Madaxweyne Mustafe ayaa ka laallaada jar, waxaana uu halis ugu jiraa in xukunka DDS uu u hayo laga qaado oo lagu beddelo qof kale oo si buuxda ugu hoggaansama Ra’iisal Wasaaraha, siyaasaddiisana si buuxda ugu hirgeliya.
Halkan ka akhriso qoraalka Aqoonyahan Faysal Cabdi Rooble:
“Here and There (kazihim kazam)
Nin Bowloos Yonnye la odhan jiray ayaa maqal ciwaankiisu ahaa halkan iyo halkeer ku qori jiray Addis Zaman 1970hii. Hadeer bal kazihim kazam ku aadan xaalada waaqiciga ah ee DDS aan fiirino
1. Warar la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in MW Mustafa ku dhawyahay in awoodiisa waayo. Waxse si xaqiiq ah u xaqiijinayaa arintaad ma jiro. Shaly ayuu Nairobi ka soo noqday Addis ayaanu hadeer joogaa.
2. Xoogaga taageera MW Mustafa gaar ahaan qurba joogta isaga raacsan ayaa warwer aan la qaran karin beryahan muujiyay. Waxaad moodaa in ay isaga la hadleen arimaha la sheegsya a wax ka jiraan.
2. Waxa la isla dhexmarayo in la rabay in odaydhaqameedka DDS la abaabulo oo layidhaa mudaaharaada. Waxay u egtahay in ay doorkan diideen in ay noqdeen waxa loo bixiyey “koofiyad baclayaal.”
3. Waxa la sheegayaa in shaqsiyaad Golaha dhexe ee SDP la hadleen ONLF. Hase yeeshee ONLF albaabada ayey SDP ka xidhatay.
4. Waxa Addis Ababa naga soo gaadhay in Oromodu ay si ba’an uga biyo diideen MW Mustafa, Axmarano ka aamin baxday gaarahaan xiligii uu isu dhiibay sheeko baraleydoo “Kushitiga dadka ah.”
5. Maliishooyinkii jiitada ama xabadka Oromo DDS la leedahay waxa lagu soo xereeyey Buurta waxana lagu badalay Liyo Bolis.
Ilaa hada xeelad dagaal ama soo rogaal celin cad oo dhinaca MW Mustafa ka soo ifbaxaysas ma jirto. In Jigjiga mudaahar laga abaabulana waxa diiday, waa sida kazihim ka zam lagu qeexaya, Abdi Casdil oo aha hogaanka Nabadgalyada DDS.
Madaxweyne Mustafe Oo Xilka Laga Qaado, Faa’iido Iyo Khasaare Midkee DDS Kasoo Gaadhi Doona?